Ciidanka DF oo la wareegay Daljirka iyo waddooyinka Muqdisho oo saaka xiran - Caasimada Online
Home Warar Ciidanka DF oo la wareegay Daljirka iyo waddooyinka Muqdisho oo saaka xiran
Ciidanka DF oo la wareegay Daljirka iyo waddooyinka Muqdisho oo saaka xiran
Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka ayaa saakay xiray waddooyinka Magaalada Muqdisho, waxaana ay joojiyeen isu gudubka Gaadiidka, inkasta oo ay dadku lugeynayaan.
Waddooyinka Maka Almukarama, Wadnaha, Soddonka & Warshadaha waxaa xalay la dhigay Ciidamada Ammaanka Dowladda Federaalka oo saakay celinaya Gaadiidka Dadweynaha, kuwa gaarka & Bajaajyada.
Ciidamo farabdan ayaa saaka taagan wadda kasto iyo guud ahaanba Taallada, waxaana Ciidanku ay dadweynaah u diidayaan in ay isticmaaalaan waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa Taallada, waxaana lasoo dhoobay Ciidamo kala duwan.
Inkasta oo maalin Jimco ah ay tahay oo dadka inta badan ka nastaan Goobaha Shaqooyinka iyo Waxbarashada balse waxaan muuqan dhaqdhaqaaq socod oo dhanka Gaadiidka ah sida ay xaqiijiyeen ilo kala duwan.
Meelaha qaar waxaa la maqlayaa rasaas askarta ay ku rideyso Gawaarida kasoo baxa Xaafadaha kuwaas oo doonaya in ay cagaha saaraan Laamiyada waaweyn ee Caasimadda.
Ujeedka ugu weyn ee xiritaanka waddooyinka Muqdisho & ciidanka Dowladda soo dhigtay ayaa ka dambeysa kadib markii Musharixiintu ku adkeysteen in uusan baaqan isu soo bax nabadeed oo ay iclaamiyeen.
Midowga Musharaxiint ayaa sheegay in aan la aqbali doonin in maanta xoog lagu baajiyo banaanbixii ay ku baaqeen loona baahan yahay in shacabka loo furo wadooyinka.